गरीबीको नाममा राजनीति कहिलेसम्म? – tistung deurali
गरीबीको नाममा राजनीति कहिलेसम्म?
अहिले भन्दा पहिले हाम्रो देशमा गरीबी ज्यादै भयावह थियो। सन् १९५० ताका साक्षरता २% को हाराहारीमा थियो रे। अहिलेको स्थिति निकै राम्रो त छैन, तर पहिले भन्दा धेरै सुधार भएको छ। प्रत्येक गाउँमा कम्तिमा एकपटक विदेश गएका मान्छेहरु होलान्। आज धेरै नेपालीहरुले हवाइजहाज र रेल चढेका छन्, जमीन मुनी हिँड्ने रेलहरु पनि चढेका होलान्, गगनचुम्बि घरहरु देखेका छन्, इन्टरनेट इमेलको बारेमा थाहा पाएका छन्, मोबाइल फोन चलाएका छन्, आफ्नो देशका ठुलाबढाहरुलाई टिभि रेडियोमा पहिलेभन्दा धेरै देखेका छन्। बाल र मातृ मृत्यु दर घटेको छ, औसत आयु बढेको छ। शिक्षीत जनसंख्या पनि बढेको छ। आफ्नै वरिपरिमा मान्छेहरुलाई हेर्नुस्- पहिलेभन्दा धेरै मान्छेहरु स्कूल, क्याम्पस गएका छन्, कतिले त देश-विदेशको शिक्षा र रोजगारी पनि देखेका छन्।
तुलनामा मलाई हाम्रो देश हाँक्ने राजनीतिज्ञहरु अलि पिछडिएका, असभ्य र दरीद्र छन् कि जस्तो लाग्छ। विदेश जाँदा उताका पदाधिकारीहरुको अगाडि शायद लाजैमर्दो स्थिति श्रृजना हुन्छ होला उनीहरुको व्यवहारले।
नेपालमा अधिकांश राजनीतिज्ञहरु गरीबको नाममा राजनीति गरिरहेका छन्। यो नेपाली जनताहरुको अपमान हो। कहिलेसम्म गरीबीको राजनीति गर्ने हो? विश्वमा धेरै देशहरुबाट ठूलो संख्यामा मानिसहरु गरीबीको रेखा मुनीबाट मध्यम वर्गमा पुगिरहेका छन्। जस्तै: भारत, चीन, बङ्गलादेश, ब्राजिल, अफ्रिका। नेपालको पनि स्वाभाविक गति यहि नै हो। विश्वमा चलिरहेको धारबाट यसरी नेपाल मात्र कहिलेसम्म अप्राभावि रहिरहन सक्छ? माथि भनेजस्तै केहि हदसम्म नेपालमा प्रभाव परेकै हुँदा थोरै भएपनि मानिसहरुले अवसर पाएका हुन् र गरीबी कम भएको हो। नेपालमा भन्दा अझै भयानक समस्याहरु भएका अफ्रिकी देशहरु पनि अहिले यो धारको फाइदा लिइरहेका छन्। पहिले हामीले पिछडिएको भन्ने गरेको बिहारले पनि विस्तारै काँचुली फेर्न थालेको छ अरे। हामीले हेप्न पाइरहेका अफ्रिकाका धेरै देशमा अहिले मानिसहरु त्यो भन्दा तीब्र दरमा गरीबबाट मध्यम वर्गमा उक्लिरहेका छन्। त्यसकारण नेपालको विशिष्ट स्थिति र समस्याहरुको कारणले (वा नेपालको संविधान नराम्रो भएकाले) गरीबी कम नभएको भन्ने तर्कमा त्यति दम देख्दिन।
नेपालमा करीब एक-तिहाई जनसंख्यालाई अहिले मध्यमवर्गीय भएको तथ्याङ्कहरुले देखाएका छन्। तर पनि देश चलाउने योजनाहरु आफुसँग भएको दावि गर्ने मानिस र पार्टीहरुले आफ्नो पुरानो नारा र योजनामा खासै परिवर्तन गरेका छैनन्। नेपालीहरु अघि बढिरहेका छन् र अघि बढ्न चाहिरहेका छन्, उनीहरुलाई नेतृत्व गर्नेहरुले रोकिरहेका छन्। नेपालमा सुकिला-मुकिला र मैला-धैलाहरु बिचको कृतिम विभाजन हानीकारक छ। पहिले मैला-धैलाहरु अत्यधिक बहुमतमा हुँदा लौ ठिकै थियो भन्न सकिन्छ। नेपालीहरुले आफ्नै बलबुताले भ्याएसम्म गरेर आफुलाई सुकिला-मुकिला बनाउने प्रयत्न गरिरहेको र केहि सफलता पाइरहेको समयमा यस्तो किन गर्नुपर्यो? नेपालीहरुले युद्ध चलिरहेको समयमै यति उपलब्धि हासिल गरेका हुन्। कतिपय विषयहरुमा हामीले भारतले भन्दा राम्रो गरेका छौँ, भारतका धेरै पिछडिएका राज्यहरुभन्दा त हामीले अझै धेरै बढि सफलता पाएका छौँ।
यस्तै रहिरहने हो भने केहि दशकमा नेपालमा सुकिला-मुकिलाहरु को संख्या अझै बढ्ने छ, बहुमतमा पुग्नेछ। नेपालीहरु सँधै यस्तै दु:खमा बाँच्न चाहन्नन्, उनीहरुका शाषकहरुले त्यस्तै चाहेपनि। विश्वमा पनि यो धार चलिरहेको छ, नेपालमा पनि चलेकै हो। नेताहरु र सरकारले निकै कम सहयोग गरेपनि नेपालीहरु आफैँले आफुलाई सुकिला मुकिला बनाउने प्रयासमा मरिमेटेर लागि रहेछन्।
यस्तो अवस्थामा पनि उहि पुरानै गरीबीको नारा कति सान्दर्भिक छ? केवल गरीबहरुको मात्र प्रतिनिधित्व गर्छु भन्नेहरुले त्यस्तो तरिका भविष्यमा कति प्रभावशाली हुन्छ, विचार पुर्याइराखे राम्रो हुन्छ कि? के यस्तो संकुचीत किसिमको गरीबी केन्द्रित मानसिकता, भोट राजनीति र विभाजनकारी खेलहरुले साँच्चै हाम्रो हित गरिरहेको छ? कि अब अलि फराकिलो, सम्पन्नता उन्मुख र आधुनिक विचार र राजनीतिको बेला आएको हो? नेपाली जनताहरुलाई सधैँ गरीब, पछौटे र मैला-धैला भनेर अपमान गरिरहने कि उनीहरुको सम्पन्न र सभ्य हुने आकांक्षाको सम्मान गर्ने? के हामी आफूभन्दा पछौटे र मानसिक रुपमा दरीद्रहरुको यस किसिमको अपमान सहिराख्ने कि फरक किसीमको सोचाईको विकास गर्न अग्रसर हुने? मान्छेहरुलाई गरीब हुन दिनु हुँदैन र सम्पन्नता हाम्रो समाजको उद्देश्य हुनुपर्छ। तर गरीबी नभए आफ्नो राजनीति गर्ने आधार नै नहुने हुँदा त्यस्ताहरु बाटै कतै गरीबी नियन्त्रणमा उल्टो प्रभाव त परेको छैन?
यो लेख सेतोपाटीमा प्रकाशित भएको थियो ।
Posted in economy, nepal, politicsTagged development economy Nepal politics poverty prosperity setopati
← गरीब देश कि गरीब जनताहरुको देश?
एडिएस​एल गुनासो →